၄ အောင်မြင်သောဘလော့ဂ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အဖြေပေးရန်မေးခွန်းများ - Nicheonlinetraffic
demandmetric.com အဆိုအရ, တစ်ဦးချင်းစီ၏ 70% ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအစားကြော်ငြာတွေကနေတဆင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြိုက်တတ်တဲ့။ ထို့ပြင်သူကတစ်ဦးချင်းစီ၏ 80% သင်ယူမှုဒီလိုမျိုးအဘို့အထုံးစံအကြောင်းအရာကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ custom အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းနေဖြင့်အဆောက်အဦဆက်ဆံရေး၏ရည်ရွယ်ချက်ကနှင့်အတူဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့်အတူတစ်နှောင်ကြိုးစေသည်တစ်ဦးပုံပြင်မျှဝေဆိုလိုသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများဝေမျှဘို့, ဘလော့ဂ်တစ်ခုစံပြကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ တန်ဖိုးရှိသောဘလော့ဂ်ပို့စ်တင်ဖောက်သည်ထံမှယုံကြည်မှုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်သစ္စာရှိမှုလာပြီတစ်ခုစိတ်ချစွာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်-ပြောပြအကြောင်းအရာနှင့်, သင် ORGANIZATION သင့်ရဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုအထက်တန်းလွှာကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ကြွင်းသောအရာပြိုင်ဘက်ထံမှထွက်ရပ်တယ်။
ဒါကဖြစ်ကောင်းအရေးကြီးဆုံးစုံစမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဘလော့ဂ်ချင်အဘယ်ကြောင့်နည်း ပညာရှင်တွေရဲ့ကအကြံပြုသို့မဟုတ်ပညာရှင်များငွေရှာဘို့ပိုနှစ်သက်ရုံကြောင့်ဘလော့ဂ်စရာမလိုတော့ဘူး။ သင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ငွေရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါကစိတ်ကိုနှင့်ရည်မှန်းချက်နှစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့အ blogging သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ပေးသည်နေစဉ်, ဖောက်သည်အပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရည်မှန်းချက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ တစ်ဦးရည်မှန်းချက်လိုက်သည်, သင်, သင်တစ်ခုခုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ရှိမရှိရှာဖွေသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသရုပ်ပြ, ဒါမှမဟုတ်တချို့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုပေးပါရန်လိုအပ်သည်။
ပန်းတိုင်ရှင်းပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကရေးစည်းရုံး, သူတို့သည်သင်၏ဖောက်သည် '' ဖြည့်ဆည်းအဖြစ်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ပုံပြင်များဝေမျှဖို့ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုထိရောက်ဖြစ်လာသည်။
အဘယ်သူအဘို့သင်သည် Blog သို့လိုသလား?
အဘယ်သူမျှမ! ဤသည်ဒါပေါ်မှာရိုးရှင်းတဲ့အမြိုးသမီးမြား၏အဖြေကို, ယောက်ျား, ကလေးတွေ, သက်ကြီးရွယ်အိုသို့မဟုတ်မရှိပါ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသူတို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အဘယ်အရပ်ကဧရိယာ, နာကျင်မှုအချက်များ, စိန်ခေါ်မှုများ, တိုးတက်မှု၏ဒေသများနှင့်သတင်းရပ်ကွက်များကအသကျရှငျ၎င်းတို့၏အသက်, ဦးစားပေး, ဝင်ငွေ, အလုပ်လုပ်ကိုင်သောဧရိယာ, ရှာအဖြစ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသူတို့ကို သိ. အားဖြင့်သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသိလာသည်နှင့်အမျှစာဖတ်သူများ၊ သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေသူများအတွက်သာရည်ရွယ်သည့်စာမူတစ်ခုကိုမည်သို့ရေးရမည်ကိုလေ့လာရန်ပိုမိုထိရောက်လာမည်။ သတိရပါ၊ အောင်မြင်သောဘလော့ဂ်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသတ်မှတ်ထားသော visit ည့်သည်၏အမှတ်အသားကိုသာ ထား၍ ရနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ, ဒီနောက်ကျောကိုသင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပန်းတိုင်တတ်၏။ သက်ဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့ကြောင်းမည်သည့်တန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက်မပေးပါဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမျှမတဦးတည်းပင်အများဆုံးလှုံ့ဆျောပုံပြင်ကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်သောဘလော့ဂ်, သင်ပထမဦးဆုံးအသငျသညျလိုချင်တာတွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် '' ဝယ် 'နှင့်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်' 'ယူ' '။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ပေါ်ပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာအခြားရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအာရုံစိုက်ရပ်တန့်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပြုချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်မှုစိတ်ကူးပေးပါလိမ့်မည်။
ဤသူသည်သင်တို့လည်းဖြစ်ကောင်းအောင်မြင်သောဘလော့ဂ်၏တိုက်ရိုက်အကြောင်းမရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ် Knowledgebase မှ add ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးကွဲပြားတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းဖွင့်အဆုံးသတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ aligns တဲ့လေသံနဲ့အသံကိုရွေးဖို့ပညာရှိဖြစ်၏။ စီးပွားရေးနည်းပညာလျှင်ဥပမာအားဖြင့်, သင့် post ကိုပညာရေးနှင့်လိမ္မာဖြစ်သင့်သည်။ ကိုယ့်တစ်ဦးချင်းစီအောင်မြင်သောဘလော့ဂ်ကွဲပြားကြောင်းကိုစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ Blog ကိုပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိကြမည်နည်း
သငျသညျဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းပြီးစီးတစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့အလုပ်အပေါ်မရပါဘူး။ ဒါဟာခွင့်စာဖတ်သူများလိုအပ်လိမ့်မည်နည်း ကောင်းပြီ, ထိုအဘို့, သင်ကမျက်နှာသို့အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကားမောင်းမှုအတွက်အကြောင်းအရာအတွက်သော့ချက်စာလုံးများ, URLs များကို backlinking ခြင်းဖြင့်ထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ပါတယ်နှင့်စစ်မှန်သောအသွားအလာကိုဝယ်ကြလော့။